Igama lesayensi: Rosmarinus officinalis
Igama elivamile: I-Rosemary
I-Rosemary ivela e-Yurophu.
Isitshalo seRosemary sinamandla futhi sikhule sibe ngamamitha amabili ukuphakama. Lesi sitshalo yisihlahla esiphezulu esinamahlumela esiphezulu esiphezulu. Lesi sitshalo sinamagatsha amaningi ahlangothini lapho amaqabunga amaningi anama-spiky ahamba khona. Amaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka phezulu ngenhla engaphansi. Izimbali ezisezincebeni zamagatsha ziluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Rosemary kokubili ifomu layo elisha futhi elomile lisetshenziselwa izitsha eziningi zokudla njenge-flavouring. Esinye isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile. Izimbali zinamafutha aphezulu kakhulu futhi ziveza iphunga elisha futhi elincinci le-camphor. Zonke ezinye izitshalo ziphinde zikhiqize amafutha kodwa zinephunga elinamandla kakhulu lekhamera.
I-rosemary ihamba phambili emhlabathini onomhlabathi osolwandle ogcwele kahle nge-pH ephakathi kuka-6 no-7.5. Ungatshali enhlabathini ephezulu ngobumba. Emhlabathini owunzima kakhulu, kungcono ukuqeda imigqa yezitshalo ukusiza amanzi okugeleza kude nezimpande.
Ngaphambi kokuba kwenziwe ukulungiswa kwenhlabathi kwenziwa isampula yomhlabathi okumela kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zezakhi. Inhlabathi kufanele ikhonswe ukuze ikhulule iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-600 mm. I-lime, yokulungisa i-pH, umquba noma umquba kufanele isetshenziswe futhi uhlanyelwe emhlabathini ophezulu ka-400 mm cishe amasonto amane kuya kwamatsatfu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala, faka izici zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselayo wokutshala umhlabathi emhlabathini futhi ungangeni emhlabathini ophezulu ka-20 cm. Lokhu kuhlanza noma yikuphi ukhula okungenzeka lubekwe. Uma ukuqhuma kwenziwa kanjalo lokhu kwenziwa manje futhi imbewu ye-seedbeds isilungele ukutshala.
I-Rosemary iyisitshalo esivamile esivamile esitshala esikhula ezindaweni ezifudumele futhi yenza kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-18°C no-26°C. Kubuye kube nokubekezela kweqhwa.
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko ze-rosemary ezakhiwe ezentengiso, i-Camphor-Borneol, i-Cineole no-Verbenone.
Izinhlobo ezikhona zikhona, i-Albiflorus, i-Arp, i-Benendan Blue, i-Flora Rosa, i-Hill Hardy, i- Holly Hyde, i-Huntington Carpet, i-Irene, i-Majorca Pink, i-McConnell's Blue ne-Tuscan Blue.
Kukhona ezinye izinhlobo eziningi futhi kungcono ukuthola iseluleko se-extension officer kanye nezinchwepheshe zezitshalo zezinhlobonhlobo ezingcono kakhulu endaweni yakho yokukhiqiza kanye nemakethe yakho ehlosiwe.